Ị maara ndị a top 10 Spotify ndekọ?
Ị Maara a Top 10 Spotify ndekọ?
Na-kasị mma na ndị ọkaibe Spotify edekọ bụ dị ka a nrọ-emezu dị ka ọ ga-eme ka n'aka na mmadụ na-akawanye ndị kasị mma na ọkaibe ndekọ owuwu enweghị ihe ọ bụla na-eri ma ọ bụ na-enweghị ọtụtụ-efu na Spotify songs na ndị nke ọzọ àjà na-dekọrọ na kasị mma n'ụzọ. Ọ bụ ịrụ ụka adịghị ọrụ na-lures ndị ahịa n'ime azụmahịa na ha na-n'aka na Spotify adịchaghị bụ tinye n'ọrụ iji jide n'aka na ihe kasị mma, nke e derela mgbe ọ bụla chọrọ.
Top 10 Spotify music edekọ
N'okpuru ebe a bụ top iri Spotify ndekọ nke ga-maa ịgbanwe otú music na-ege ntị site ọrụ. Nwe ha ma Mac na Windows:
Part 2. iSkySoft edekọ
Part 4. Audio ikwusi n'ike Pro
Part6. Max Music
Part 7. Aimersoft Music edekọ
Part8. Codeplex teepu
Part 9. Dojotech Spotify edekọ
Part 10. Max edekọ
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na sate nke nkà music edekọ na e paced na elu na e mepụtara site Wondershare. Ọ na-emekwa n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ndekọ mere na nanị otu click ahụ bụ ihe kasị mma na nke a
Ndị kasị mma okirikiri nhọrọ ukwuu
Unlimited faịlụ ịzọpụta
The software bụghị free iji
The ojiji bụ mgbe ụfọdụ nnọọ oru maka a onye ọrụ na-aghọta.
2. iSkySoft edekọ
Ụlọ ọrụ emewo nwekwara mepụtara a edekọ na-agaghị nanị pacify onye ọrụ ma ga-emekwa ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ọrụ na-nyere ka onye ọrụ na nke a. Mmepe nke usoro ihe omume mekwara n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ụlọ ọrụ na-nyere site emelite omume mgbe nile nke a na-eme iji jide n'aka na onye ọrụ na-mgbe hapụrụ
The interface bụ ọrụ enyi na enyi
The n'ozuzu omume bụ ihe kasị mma maka ojiji dị ka ọ dị mfe
Ihe omume ahụ bụ adịghị mfe nke na-abụghị tech ọrụ
The n'ozuzu price nso nke usoro ihe omume bụkwa a bit elu.
3. Ọjọọ Soft
Ọ bụkwa otu n'ime omume nke na-eme ka ndekọ nke Spotify n'ezie mfe na enweghị nkebi. Ọdịdị na mkpokọta okirikiri nhọrọ ukwuu nke usoro ihe omume bụ maa kasị mma maka ndị ọrụ nwere ike iji mgbagwoju omume na ala na mmepe nke usoro ihe omume e mere na-edebe ihe a n'uche.
Usoro ihe omume dị mfe maka ihe niile ọrụ iji
Atụmatụ nke usoro ihe omume bụ ruo ụbọchị
The interface bụ mgbe ụfọdụ siri ike iji rụọ ọrụ
The n'ozuzu arụmọrụ bụghị na elu dị ka e weere.
4. Audio ikwusi n'ike Pro
Dị ka aha na-atụ aro ngwá ọrụ a e wuru iji jide n'aka na songs egwuri na Spotify na-hacked enweghị ihe ọ bụla nke na onye ọrụ ọkọkpọhi ọrụ na-nke ọkachamara larịị. Ọ na-emekwa n'aka na dị ka tụnyere ndị ọzọ ndekọ na-ọrụ nke onye a na-uru.
Records niile song eme n'aka na mkpa Ama na-akpado
Ọ nwekwara ike idekọ pọdkastị
Nka na ụzụ na-eji
Interface bụ nnọọ siri ike n'ihi na onye ọrụ na-eso
Ọ bụkwa otu nke kasị mma ndekọ na e nanị wuru iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọrụ na e kwere ná nkwa site na ụlọ ọrụ na maka otu ihe ahụ ọ na-mgbe wee ruo mkpa na-achọ n'aka ndị ọrụ nke mere na ha nwere ike inwe ọrụ na ha na anya maka.
Usoro ihe omume dị mfe iji wụnye na ojiji
Na-arụ ọrụ dị ka a music editọ pacify ọrụ.
Ọ dị nnọọ oru na ọdịdị
Onye ọrụ ego n'anya furu efu mgbe ọ na-abịa iji usoro ihe omume
6. Max Music
Ọ bụkwa a omume na-ekwe nkwa na onye ọrụ na ha ga-ndị kasị mma E n'ikpeazụ ọ na-emezu nkwa na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ bụ otu nke ihe omume nke na-n'aka na onye ọrụ na-mgbe ekpe nanị ya mgbe ọ na-abịa online Spotify na ndekọ na Ya mere, ọ na-emekwa ka n'aka na ihe kasị mma ọrụ na-agbakwunyere maka onye ọrụ na onye ọ na-mere mfe ịghọta mere na ndị niile ọrụ nwere ike iji ihe omume na ala na afọ ojuju
Usoro ihe omume ike idekọ ọ bụla na website
Nwere ike ịchọpụta na ihichapụ nkịtị n'ime tracks
The interface bụ kwa-abụghị oké njọ
The tech ọrụ mgbe amasị a usoro
7. Aimersoft Music edekọ
Usoro ihe omume siworo mma ime ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma ọrụ na-adịghị nanị dị ka kwa na-atụ anya ma na ya pụta bụkwa ihe na a chọrọ site onye ọrụ. The Mmepe na-arụ ọrụ nọgidere iji jide n'aka na onye ọrụ na-pacified na-anọgide na a nzọụkwụ n'ihu nke ndị ọzọ.
E nweghị ịgba nke Ndekọ tracks
The ringtone onye nwekwara e agbakwunyere
Usoro ihe omume mkpọka mgbe ụfọdụ
The n'ozuzu arụmọrụ bụghị dị ka ihe kwesịrị ekwesị ka o yiri ka na ụlọ ọrụ gaara mepụtara ya
8. Codeplex teepu
Dị ka aha na-egosi onye na-edekọ na-ahụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na mkpokọta e mepụtara na nke kacha mma n'ụzọ na-ekwe ka onye ọrụ na-eji niile functionalities na ala na dị ka kwa ọchịchọ ma ọ bụ ina. Usoro ihe omume nakwa na e mere ihe kasị mma dị ka ọ na cross n'elu ikpo okwu na-akwado:
Ọ nwere ike dee kpọmkwem site ụda kaadị
The track ọmụma mgbakwunye bụkwa otu nke kasị mma atụmatụ na e agbakwunyere na nke a
Ọ na-adịghị ihichapụ Mgbasaozi n'ime songs dekọrọ
Ọ bụ tricky melite on windows 8.
9. Dojotech Spotify edekọ
Ọ bụ otu nke ihe omume nke na-n'aka na ọrụ e nyere kacha ike na nnwere onwe na-eme ka n'aka na songs na-dere. The njirimara nke Spotify nwekwara e mere akpaka na songs na-dekọrọ dị ka mp3. Onye ọrụ nwekwara ike iji ihe omume iji jide n'aka na ikike a n'ụzọ zuru ezu ụtọ:
Mp3 mkpado nchịkọta akụkọ e wuru na
Na-arụ ọrụ dị ka a WAV ka mp3 convertor
Ọ na-adịghị ịkpado faịlụ na song ọgụ egwu na aha ọba
The song nhazi bụkwa ngwa ngwa
10. Max edekọ
Ọ bụ a na-edekọ na e gosiri elu site ọrụ na ọ bụ ihe niile n'ihi na eziokwu na onye ọrụ bụ ike ga-esi na atụmatụ arụmọrụ na ala na afọ ojuju. Ọ na-kemgbe otu nke ihe omume na mmepe nke ndị ukwuu ọkachamara dị ka iji tụnyere ndị ọzọ omume dị:
Unlimited faịlụ na ndekọ na-azọpụta
Track gbawara na-agbakwunyere
The tech savvy ọrụ ike iji usoro ihe omume na ala
The mp3 tagger na-adịghị n'ebe agbakwunyere
Alternative maka Spotify adịchaghị Usoro
Olee otú na-ege ntị Spotify Music na Spotify maka Windows
Spotify Trial vs. Spotify adịchaghị vs. Spotify Free
Top 10 Sites Ịlụ Spotify Coupon, Spotify Promo Koodu na Discount Koodu
> Resource> Spotify> Ị Maara a Top 10 Spotify ndekọ?